के सन्चो दलिएको मास्क लगाउँदा रुघा लाग्दैन भन्ने कुरा सही हो? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
के सन्चो दलिएको मास्क लगाउँदा रुघा लाग्दैन भन्ने कुरा सही हो?
स्वास्थ्यखबर शुक्रबार, साउन १५, २०७८, १७:२६:००
प्रश्न: के सन्चो दलिएको मास्क लगाउँदा रुघा लाग्दैन भन्ने कुरा सही हो?
उत्तर: होइन। सन्चो दलिएको वा कुनै पर्फ्यूम वा बडी स्प्रे लगाइएको मास्क लगाउँदा त्यसले रुघा लाग्नबाट बचाउँछ भन्ने कुरा वैज्ञानिकरुपमा पुष्टि भएको छैन। प्रयोग गरिने मास्क सुख्खा र सफा हुनुपर्दछ। भिजेको र मैला लागेको मास्क तुरुन्तै फेर्नु पर्दछ। भिजेको, सन्चो दलिएको मास्क प्रयोग गर्दा श्वास फेर्न अप्ठ्यारो हुनुका साथै स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्दछ।